यसकारण ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता जटिल | Everest Times UK
नारी पुरुषको दाँजोमा निक्कै महात्वपूर्ण मानिन्छ समाजमा । तर, नारी आफैं २१औं शताब्दीमा पनि आफूलाई पुरुषसरह नभएको पाउँछे । कारण नारी आफै अझै पुरुषसरह हिँड्डूल गर्न, खान, बस्न आफूलाई सहज ठान्दिनँ । यसको मुख्य कारण त, समाज र नारी आफैं नै हो । किनभने कतिपय नारीहरु मैले अधिकार पाएँ भनेर रातारात बाहिर हिँड्ने, काम गर्ने, भाषण र आमसभामा भाग लिने, संघ संस्थाका विभिन्न पदहरुमा बस्ने हुन्छन् । यसो गरिरहँदा सृष्टिकालदेखि चलिआएका कतिपय घरायसी कामहरुदेखि बञ्चित हुन पर्ने हुन्छ । बालबच्चाले आमाको माया र साथबाट टाढिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदाहुँदा कतिका बच्चाहरु न्यास्रिएर गलत बाटोतिर लाग्ने हुन्छन्, कति समयमा खान सुत्न नपाएर रोगी हुन्छन् । यतिमात्र होइन अचेल कति समाजमा नारी पुरुषबीचको अनैतिक सम्बधहरुले समाज पनि धमिलिने गर्छ । मानसम्मान र ईज्जत प्रतिष्ठा गुमाएर रित्तो घर फर्कनु पर्ने हुन्छ, यो हुमनबिङ्ग पनि हो । एउटा मान्छेसँग सधंै हिँड्ने, काम गर्ने, खाने बस्ने, बोल्ने हाँस्ने गर्दागर्दा एक अर्काको आनीबानी थाहा हुँदै जान्छ र एकदिन अवस्य स्वभावैले समिपमा पुग्छन् ।
नारीका हक र अधिकारका कुरो गर्न र लेख्न जति सजिलो छ त्यसलाई निभाउन उत्तिकै गाह्रो छ । होला भलै गोडा दुई एक त्यस्ता महिला समाज र राजनीतिक क्षेत्रमा अग्रसर रहेर काम गरिरहेका । तर, मलाइ लाग्छ उनीहरु पनि आफूलाई सजिलो र सुरक्षित ठान्दैन त्यो ठाउँमा । कतै न कतैबाट उनीहरु पीडित नै हुन्छन्, पीडित नभए पनि मनमा आत्मा सन्तुष्टि भने पक्कै नमिलेको हुन सक्छ । किनभने नारी स्वभावैले कोमल र ममतामयी हुन्छन्, सृष्टि गर्ने मन आफ्नो घरबार र बालबच्चा सम्झेर कुर्सीमै बसे पनि खलबलिन्छ । हुन त यो नितान्त मेरो सोचाई, अरुसँग नमिल्न पनि सक्छ ।
अब अरुको कुरो के धेरै गर्नुभन्दा म आफ्नै उदारण दिन्छु । म एक साधारण गृहिणी, तैपनि साथीसंगीको करले कुनै कुनै संघ संस्थामा बस्छु र म इन्भोल्भ नभए पनि नाम राखिदिन्छन् र काम गर्नु पर्ने हुन्छ । मिटिंग र प्रोग्राम धाउन उत्तिकै गाह्रो छ बेलायतमा । म आफैं गाडी चलाउदिन । कहिले रेलमा, कहिले बसमा त कहिले कसैको कारमा जानु पर्ने हुन्छ प्रोग्राम र मिटिंग गर्दागर्दै, कोहीबेला उतै रात पर्छ फर्कनलाई यति समस्या हुन्छ । कहिलेकहीं त १२, १ बच्छ रातको । घरमा आउँदा केटाकेटी पनि भोकै तिर्खै, चुलाचौका पनि निभेको, कोठा लथालिंग भएको पाउछु । अब बासीतासी के के छ तताएर दुःख, सुख खान दिन्छु नानीहरुलाई । तर धन्दामन्दा ? रहन्छ तेत्तिकै लखतरान शरीर लिएर ओछ्यान पस्छु, बिहान फोनको अलराम बच्छ, मार्छु जुरुक्क उठेर निन्द्रामै पुग्छ ट्वाईलेट, निन्द्रामै ब्रस गर्छु कपडा लगाउछु र काममा पुग्छु । आफ्नो परिचय गुमाएर दिनभर काम गर्छु, मात्र कामदारको रुपमा । एवम्रितले यो नियम लागू भइरहन्छ मेरो जिन्दगीमा । म छु, मेरो काम छ र बाँचेको हुन्छु परदेशमा । ५ दिन काम २ दिन छुट्टी गरी मेरो पुरै सप्ताहान्त बित्छ । कामबाहेकका मेरा २ दिन म आफ्नो घर सरसफाई र लताकपडा धुन, सुकाउन र पट्याएर थन्काउनमा खर्च गर्छु । त्यो दिन म कस्तो आनन्दले निदाउँछु । मेरो घरको काम सकेको दिन पुरै असारको रोपाइँ सकेको महसुस हुन्छ मलाई । मेरो श्रीमान् प्रायः हरेक विकेन्ड बाहिर हुन्छ, उहाँ थुप्रै संघ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि हरेक साता कुनै न कुनै मिटिंग, प्रोग्राम र च्यारिटी डिनरहरु परिरहन्छ । तर, उहाँ रातको १, २ बजे फर्के पनि समस्या छैन र समाजले पनि देख्दैन । उहाँ ढिलो आएको, रातरात बाहिर रहेको किनकी उहाँ एक पुरुष हो र पुरुषलाई स्वतन्त्र छ हिँड्डूल गर्न । अनि घरमा पनि उहाँ जति बेला आए पनि खाना पाकेको हुन्छ, ओछ्यान चित्तिक्क हुन्छ, बालबच्चाको चिन्ता लिनु पर्दैन । भान्सा उज्यालो हुन्छ किनकि म, उहाँको श्रीमती घरमा छु । बालबच्चाको आमा घरमा छु, समाजको छोरी बुहारी घरमै हुन्छन्, सासु ससुराको बुहारी घरमै । र, म यसैमा खुसी र सन्तुष्टि पनि छु । मेरो घर संसारमा रमाएकी हुन्छु, श्रीमान् दिनभर जहाँ भए पनि साँझ सकुशल घर फर्केको हुन्छ त्यो भन्दा खुसी अरु मलाई केही चाहिंदैन र चाहेको पनि छुइनँ सायद ।
तर, म मेरो देशको कानुनमा आफ्नो हक अधिकार ३३ प्रतिशतले पाएकी छु, संविधानमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, लेखपढ गर्न स्वतन्त्र छ । तर, म आफंैले सबथोक लागू गर्न या अपनाउन सक्दिनँ किन ? यो प्रश्नको जवाफ सायद मेरो आमा र बोजुले सजिलै देलान् तर, म दिन सक्दिनँ । यसरी चलेको हाम्रो नेपाली समाजमा अझै धेरै समय लाग्छ महिलाले पुरुषसरह बन्न र आफूलाई बनाउन । पहिलो कुरो त, आफूले आफंैलाई परिवर्तन गर्नसक्नु पर्‍यो, मनले मान्नु पर्‍यो घरबार छाडेर पुरुषसरह हिँड्न । नत्र संविधानले दिउँ कि नदिऊ ? भन्दै लोभिँदै लोभिँदै बल्लतल्ल दिएको त्यो ३३ पर्सेन्ट महिला अधिकार पनि महिला आफैंले लागू गर्न सक्दैन मेरो विचारमा ।